musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Madhimoni eLa Digue Island
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
La digue chitsuwa
Sezvo Mutambo weKufungidzira, unozivikanwawo seLafet La Digue kuvagari vemo, uchiswedera, tinodonhera mukunaka kutsvuka kwechitsuwa.
Mutambo weKufungidzira, unozivikanwa kuvagari saLafet La Digue, chiitiko chikuru chinokwezva maziso ese kuLa Digue.
Mhemberero idzi dzinoitika kwemazuva akati wandei nezviitiko zvikuru musi waNyamavhuvhu 15, kusanganisira muzinda wakavhurika ku "La Grotto" uyo unopinda naBhishopi weSychelles.
Iyo misa inoteverwa neyechinyakare kufora kuburikidza nenzira dzeLa Digue kuenda kuSt Mary's Church.
Mhemberero idzi dzinoenderera mberi nezviitiko zvetsika, bato remumigwagwa uye mimhanzi yemimhanzi inoridzwa nevaimbi vemuno vanonamira mukati menguva dzamanheru. Mutambo uyu waisazove wakakwana pasina zvitoro zvekudyira zvine chikafu chakasiyana, kunyanya zvechinyakare zvekudya zvekudya kune vashanyi vayo. Lafet La Digue mufananidzo une simba wetsika dzetsika dzevanhu vemuSeychellois.
Chidiki pane zviwi zvihombe zvitatu muzvitsuwa zveSeychellesChitsuwa cheLa Digue chinozivikanwa neyakavimbika, inokwezva vafambi vanobva kwese kwese. Nemamiriro ayo akadzikama, ichi chitsuwa chidiki chinodzosera nguva kuhupenyu hwakareruka hwekumaruwa uko matirakiti ebhasikoro netsoka ndiyo nzira yakakurumbira yekuvapo kwevanhu.
Rwendo rwemaminitsi makumi maviri chete rwechikepe kubva kuPraslin Island, isina airport, La Digue inogara kune mamwe emahombekombe eSychelles asina kunyatsozivikanwa senge inozivikanwa Anse Source D'Argent, rimwe remabhishi anotorwa mifananidzo. Kutsauka pamahombekombe ane pearar aya ane matombo ehusimbe, akareba, anongogona kuwanikwa mune iyi Indian Ocean archipelago.
Ichi chitsuwa chidiki chinodzosera kumashure mawoko enguva, ichikupa iwe kunzwa kweiyo yakajairwa Seychellois mararamiro kusati kwatanga kweanhasi, chimwe chinhu icho munhu anongowana chete kuona kune zvimwe zviviri zviwi zvihombe. Tora bhasikoro rako uchienda kumahombekombe kuenda kuL'Union Estate Park uye woongorora chigayo checopra, uko kwakagadzirwa mafuta emhandara ekokonati, uye kufamba-famba mumizambiringa yeminda yevanilla. Iyo Estate zvakare iri kumba kune yechinyakare French-colonial masitayera imba yekudyara uye kumakuva kwevepakutanga vanilla-varimi vanogara.
Kupfuurirazve pasi, panoperera L'Union Estate, iwe unozviwana uchinge uchitsika pamhenderekedzo chena dzeAnse Source D'Argent yakakomberedzwa nemvura ye-turquoise nematombo anopenya. Miti yemichindwe uye zvinomera zvakasvibira munzvimbo dzayo zvinongowedzera runako rweichi chinoshamisa nzvimbo, inozivikanwa pakati pevashanyi nevagari vemo. Iwe unogona kutopopota neinonakidza iyo Ile de Cocos uye snorkel pasi pemvura yakajeka-yekiriniki padhuze nezvishamiso zveSeychelles hupenyu hwegungwa.
Nzira dzehunhu dzeemaridhi girini dzinounza iwe padhuze nemasikirwo kupfuura nakare kose kukweva iwe mune ine hupenyu hwesimba. Kana iwe uine rombo rakanaka iwe ungatoona isingawanzo paradhiso flycatcher pakati pemakata uye bodamier miti munzvimbo inoera yeLa Digue Veuve Reserve.
Muchimiro chechokwadi chechitsuwa, idya netsoka dzako mujecha pane chimwe chemaresitorendi emahombekombe echitsuwa ichi kana kubata kuruma padanga remahombekombe. Chitsuwa ichi chichava netastebuds yako ichiputika nevhu rakapfuma hwecreole chikafu, uchishandisa izvo zvakapusa zvinoshandiswa zvinosanganisira chikafu chegungwa chakabatwa kwazvo. Iwe unogona kutomhanyira kune vamwe vevabati vehove vemo mumapirogu avo emapuranga kana kutakura michero yebasa ravo pamatanda.
Kunyangwe iri diki uye yakanyarara, La Digue inobata hunyanzvi hwezvishamiso kune wese munhu, ichisiya inogara isingaite nehunaku hwayo uye hunogamuchira vaenzi.
NASA Inocherekedza $28 Mamirioni kune Zvitsva Zvekutsvagisa Zviitiko
Carnival Corp. Ikozvino Kutumira 110 Plus Cruises kuJamaica
Bangkok iri kugadzirira njodzi huru yemafashama